२२ वर्षे युवकका तीन श्रीमति फेरी चौथो सौता खोज्दै - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज क्या बोर यार ! २२ वर्षे युवकका तीन श्रीमति फेरी चौथो सौता खोज्दै
२२ वर्षे युवकका तीन श्रीमति फेरी चौथो सौता खोज्दै
काठमाडौं । पाकिस्तानी एक २२ वर्षीया अदनान नामक युवकका तीन श्रीमतिले पुनः चौथी सौताको खोजि गरिरहेको समाचार गल्फ टुडेले छापेको छ । मुस्लिम समुदायका अदनानसँगै तीनैवटी श्रमिती हुनु अनौठो नभए पनि उनका तीन वटै श्रीमतिले चौथो पत्नीको खोजी हुनुचाहि अनौठो मानिएको यो समाचार विश्वमै चर्चामा छ । उनीसँगै छन् । पाकिस्तानको सियालकोटका अदनानको चर्चा अहिले विदेशसम्म पुगेको छ । मुस्लिम समुदायमा १ भन्दा धेरै विवाह गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन तर श्रीमतीले नै आफ्नी सौता खोज्नु भने निश्चय पनि अनौठो कुरा हो ।
अघिको समचार भोजपुरे उद्यमी राउत उवा महासंघ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित
अर्को समचार पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ मंसिर ६ गते (सन् २०२० नोभेम्बर २१ तारिख) शनिबार : ॐ शन शनिश्चराय नमः शनिदेव महाराजकी जय